SomaliaReport: Danjire Cali oo Codsaday Kaalmo Badan
Iyada oo ay tirada dadka ka qaxaya aagagga ay AL-SHabaab gacanta ku hayso ee Ku sii jeeda meelaha ay dawladdu maamusho sii kordhayaan ayaa waxay AMISOM bilowday qorshe ah qodidda ceelal ay dadka barakacay ee biyo la’aantuna hayso ka cabaan. Sidaana waxaa sheegay safiirka dawladda soomaaliya u jooga dalka Kenya oo dhawaan ka soo noqday Muqdisho.
“Ceelasha waxaa laga qodi doonaa meelaha ay dawladdu maamusho, waxaana ka faa’iidi doona dadka ku sugan nawaaxigaa”. Danjire Maxamed Cali ayaana talaadadii u sheegay wargayska Somalia Report, xili uu ku sugnaa Nairobi.
Kumanaan dad ah iyo xoolahooda ayaa yimid Muqdisho iyaga oo ku soo degay meelaha kooban ee ay dawladda iyo ciidamada AMISOM gacanta ku hayaan, waxayna dadkaasi raadinayeen raashin iyo biyo ay ku noolaadaan.
Danjire Cali oo booqasho ku tagay meelaha ay ku nool yihiin dadyowga soo barakacay ayaa walaac ka muujiyey kana dayriyey xaaladda daran ee ay ku sugan yihiin dadkaasi, wuxuuna yidhi “ Dadkan soo qaxay oo u badan dumar iyo caruur ayaa ku nool muddulo iyo dhis laga sameeyey ulo iyo calalo aad u liita, kuwaas oo aanan ka celin Karin kulaylka maalinka iyo qabawga habeenkii”.
Safiirka ayaa wuxuu yidhi “ dadkani waxba ma haystaan, cunto iyo biyo ma haystaan, xaaladdooduna way ka sii daraysaa”. isagoo hadalkiisa sii watana wuxuu yidhi “qaarkood waxay noo sheegeen inaysan sitimaan waxba cunin, qaarna ma helaan waxyaabaha aasaaska u ah nolosha aadamaha”.
Safiirku wuxuu ku nuuxnuuxsaday inay hay’aadka caalamiga ahi u soo guuraan muqdisho si kaalmo wanaagsan ay dadkan baahani u helaan, loona joojiyo isku dayga ah in waddamada dariska ah laga quudiyo dadkan soo barakacay. safiirka oo hadalkiisa si wata ayaa yidhi “ Waa amaan in laga hawl galo meelaha ay dawladdu maamusho, dadkani ma sugi karaan nabad, waxay u baahan yihiin kaalmo deg deg ah, sidaa darted waa inay hayadaha gargaarku u guuraan muqdisho si ay indhahooda ugu arkaan waaqica meesha yaala”.
Safiirku wuxuu kale uu sheegay inay hawl-wadeenada dawladdu mushaarkooda wax ka jari doonaan si ay u caawiyaan dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen. Wasiir walba wuxuu ka bixinayaa mushaarkiisa 500$, xildhibaanada baarlamankuna waxay mushaarkooda ka bixin doonaan 100$, halka shaqaalaha dawladduna ay bixin doonaan 5% si loo caawiyo dadka baahan.
Dadka ku hoos nool Al-Shabaab ayaynan suurogal u ahayn inay ka baxsadaan waxyeelada abaaraha, waxaana intaa u dheer inay xoogagga Al-Shabaab xoog uga qaataan xoolahooda, isla markaana ay caruurta iyo waayeelkaba u isticmaalaan hurinta dagaalka ay kula jiraan dawladda.
Dagaalka xagjire-yaasha diimeed oo hadda afar jirsaday ayaa keenay dhimasho ah 21,000 kuna kalifay dad gaadhaya hal malyan iyo badh inay barakacaan.